ဆိုက်ပရပ်စ်ခုနှစ်တွင် Kykkos စဉ်းစားသည်အချမ်းသာဆုံးအရာများစွာကိုသြသဒေါက်ဘုန်းကြီးကျောင်းများရှိပါတယ်။ အတော်များများလှည့်ခရီးသည်များနှင့်ဤသန့်ရှင်းရာဌာနသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းငှါရှာကြံဘုရားဖူး။
အဆိုပါ Kykkos ကျောင်းတိုက်၏သမိုင်း
ပထမဧကရာဇ် Alexius Comnenus တမန်တော်လုကာကိုယ်တော်တိုင်အားဖြင့်ရေးသားခဲ့သောဘုရားသခငျ၏မိခင်များ၏ကျွန်းအိုင်ကွန်မှယူဆောင်ခဲ့သည်အပြီးမင်္ဂလာအပျိုကညာမာရိကဘုန်းကြီးကျောင်း Kykkotissa 1080 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
အတော်များများလှည့်ခရီးသည်များစိတ်ဝင်စားမှုများဘုန်းကြီးကျောင်းသို့သွားရောက်ခြင်းသည့်အခါ: "အဘယ်ကြောင့်၎င်း၏အမည်ကိုအတွက်စကားလုံး Kykkos အသုံးပြုသနည်း" ။ သန့်ရှင်းသောနေရာသို့ရပ်တည်သောတောင်တော်, ၎င်း၏အမည်ကိုယူဘာကြောင့်အများအပြားသီအိုရီရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးကဒီမှာဗိမာနျတျော၏ဆောက်လုပ်ရေးခန့်မှန်းသည်ငှက်၏ဇာတ်လမ်းပြောပြသည်။ ဒုတိယတဦးတည်းဧရိယာအတွင်းကြီးထွားလာချုံ "Kokkos" အကြောင်းကိုပြောလိုက်ပါတယ်။
ဘယ်မှာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် 1310 မီတာအမြင့်မှာတောင်ကြီးတောင်ငယ်, Troodos ၏အနောက်ဘက်မှတည်ရှိပြီး, Kykkos ၏ကျောင်းတိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုရရန်ထားရှိနိမိတ်လက္ခဏာလမ်းကြောင်းတစ်ဝှမ်းအတိုင်း, ကားတစ်စီးပေါ်မှာအလွန်လွယ်ကူသည်။ မှ: အဘုန်းကြီးကျောင်းအားဖြင့်နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည် ပါဖု (မတ်စောက်သောအလှည့်နှင့်အတူ) နှင့် Poly နှင့် Limassol (ပိုမိုချောမွေ့ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံ) ။
အဘယ်အရာကို Kykkos ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင်တွေ့မြင်သလော
ဆိုက်ပရပ်စ်မှလာလှည့်ခရီးသည်များအကြား, ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအဆရာတော်၏၏အားထုတ်မှုကိုကျေးဇူးတင်သူလုပ်ကိုင်ရန်ဆက်လက်ပြုလုပ်ဝန်ဆောင်မှုထဲကယူသွားတတ်၏, သို့သော်ခရီးသွားဧည့်အခြေခံအဆောက်အအုံက၎င်း၏ပိုင်နက်အတွင်းကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးမသာ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
ပြီးတာနဲ့ဘုရားသခင်၏ stauropegic Kykkotissa ကျောင်းတိုက်မိခင်ထဲမှာ, ဗာဂျင်း၏အိုင်ကွန်ကိုကြည့်ဖို့သေချာပါစေ။ ဒါဟာခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းအတွင်းပိုင်းတည်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်လုံးဝအလုပ်မလုပ်ပါဘူးတွေ့မြင်ခြင်းငှါ, တံခါးပိတ်ကုလားကာအိုင်ကွန်အဖြစ်နှင့်သာသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုပွင့်လင်းဖြစ်နေဆဲပင်။
ကျော်ကြား icon များအပြင်, ကဘုန်းကြီးကျောင်းသို့သွားရောက်ရန်အကြံပြုသည်:
1997 ကတည်းက mirotochit သောဘုရားသခင်၏ရွှင်လန်းခြင်းနှင့်နှစ်သိမ့်၏မိခင်များ၏ icon;
ဂိုဏ်းချုပ်ကြီး Macarius III ကို, ဆိုက်ပရပ်စ်၏ပထမဆုံးသမ္မတ၏သင်္ချိုင်းကို;
ရာဇပလ္လင်, သောကျပေး icon တွေကိုမိတ္တူအရပ်၌ရာဇပလ္လင်၏ထိပ်ပေါ်မှာ။ ကလူမိုဃ်းကိုရွာစေဘို့တောင်းဆိုနေတာဆုတောင်းဖို့ဒီကိုလာမူထသော,
မြောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသောပြတိုက်။ ဒါဟာခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းပန်းကန်ဟောင်းနွမ်းစာအုပ်တွေနဲ့ icon တွေကိုတစ်ခုကြီးမားစုဆောင်းမှုဝါကြွားတတ်;
သင်သိမထားဘူးဆိုရင် ဆိုက်ပရပ်စ်ကနေယူဆောင်လာရန်အဘယ်အရာကို ဒီမှာအချို့ကိုသင်အမှတ်တရပစ္စည်းများသို့မဟုတ်နာမည်ကြီးဒေသခံစပျစ်ရည်ကိုမဝယ်နိုင်ပါ။
ထိုင်းနိုင်ငံအဘယ်သို့ပြုကြဖို့မ - ခရီးသွားဧည့် 15 ပိတ်ပင်မှု
ဘူခါရက် - ဆွဲဆောင်မှုများ
ရထားပေါ်တွင်ဝန်ဆောင်မှု၏ 2T လူတန်းစား
Bakhchisarai - ဆွဲဆောင်မှုများ
သစ်တော်သီး၏ယို - အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလသကြားလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
လိပ် - ပြည်တွင်းမျိုးစိတ်
ဝိန်း Fort စန်း Lorenzo
မိမိအ 80 မွေးနေ့၏ဂုဏ်အသရေအတွက်ကာတွန်း "Snow White နှင့်ခုနစ်ထောင်ပြီး" အကြောင်းကို 16 အံ့သြစရာအချက်အလက်များ!
တစ်ဦး highchair ရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အရသာရှိတဲ့ပထမဦးဆုံးသင်တန်း9အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ - multivarka အတွက်ဟင်းချို
အရင်ကဆိုရင်များအတွက်အရေးကြီးသောလမ်းညွှန်မှုနှင့်စည်းမျဉ်းများ - နွေဦးအတွက်စပျစ်သီးပျိုးပင်များစိုက်ပျိုး
Geksoral - Analogues
သခွားသီး "Masha F1 ကို»